प्रभु इन्स्याेरेन्सकाे आइपीओ ५० प्रतिशतभन्दा बढीले नपाउने, कतिले पाउँछन् ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyप्रभु इन्स्याेरेन्सकाे आइपीओ ५० प्रतिशतभन्दा बढीले नपाउने, कतिले पाउँछन् ?
प्रभु इन्स्याेरेन्सकाे आइपीओ ५० प्रतिशतभन्दा बढीले नपाउने, कतिले पाउँछन् ?
प्रभुको आइपीओमा कुल आवेदकको संख्या १० लाख ८२ हजार १४३ जना रहेको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । यसआधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरीएको ५४ लाखलाई आधार मान्दा ५ लाख ४० हजार जना आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर हात पार्ने देखिएको छ । ५ लाख ४२ हजार १४३ जना भने आइपीओ पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् । बिक्री प्रबन्धकका अनुसार कतिपय आवेदनमा त्रुटी भेटिएकाले भेरिफाई गर्दा सेयर पाउनेको संख्या सामान्य बढ्न भने सक्नेछ ।
Previous articleUjyalo FM
Next articleनेपाली क्रिकेट प्रशिक्षक वाटमोरको गर्विलो इतिहास